लुरी केटी
‘एउटी युवती त्यतिखेर सुन्दर देखीन्छे जब उसको शरीरमा रातो रङ मात्र भेटिन्छ!
‘अलच्छिना! सेतो रङ त लोग्ने मरेकाले मात्र लाउँछन्!’
लुरीलाई ठयाक्कै सम्झना छैन, तर यस्तै केही उसका घर परिवारका कोहीले उसकी भाउजुलाई भनेका थिए। जतिबेला उसकी भाउजु सेतो कुर्ता–सुरुवालमा सजिएकी थिइन्।
अब कसरी थाहा पाउने आँसु कस्तो छ? उसलाई हतपत रुन मन लाग्दैन। रुने त दुःखीहरु हुन्। ऊ त खुसी छे। हाँसीरहन्छे, आफ्नो संसार मा नाचिरहन्छे। उसकी काकीले पनि लुरी रोएको विरलै याद गरेकी थिइन्।
समय बित्दै गयो, लुरी तरुनी भई। काकी अलि चाँडैदेखि रोगी थिईन्। संसारबाट बिदा भइन्।
उसको रोदनसँगै निस्केका नबुझिने आवाजहरु बिहेमा आएका पाहुनाहरुको कानमा पुग्न थाल्यो। सबैले लुरी रोएको देखे/सुने। तर लुरीले आफ्नो अगाडि केही बर्षअघि बितेकी आफ्नी प्यारी ‘आन्टी’लाई मात्र देखी। लुरीकी काकी सेतो परीको कपडामा जादुको छडी हातमा लिदै मुस्कुरार्इ रहेकी थिइन्।
आफ्नी प्यारी काकीलाई धेरै वर्षपछि त्यसरी अगाडि उभिएको देख्दा लुरीलाई असह्य पीडा भयो। उसले मनको संसार हल्लिने गरी चिच्याएर आफ्नी काकीलाई भनी, ‘आन्टी मेरो आँसुँ रातो रैछ, मैले त रातो रङ रुन पर्छ।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण ७, २०७३ १५:३०:२४